काठमाण्डौ । कच्चा तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकमा कच्चा तेलको उत्पादन कटौति गर्ने बिषयमा सहमति बनेको छ । यो सहमतिको खबर सार्वजनिक भएसँगै कच्चा तेलको मूल्यमा भारि वृद्धि भएको छ । भियनामा भएको बैठकपछि कच्चा तेलको उत्पादन कटौतिको घोषणा गरिएको छ र यो घोषणासँगै कच्चा तेलको मूल्य ८ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । ओपेकका...
काठमाण्डौ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी नोट सेभेनको असफलताबाट अरबौं घाटा व्यहोरे पनि सेयरधनीलाई उच्च लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार सामसङले यो वर्ष सेयरधनीलाई गत सालको भन्दा उच्च लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । सामसङले सेयरधनीलाई यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।...
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि ग्रिन पार्टीकी उम्मेदवार जिल स्टेनले पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उनले विसकन्सिनसहित मिशिगन र पेन्सिलभेनियामा पनि पुनः मतगणना गर्न माग गरेकी छन् । उनले ट्रम्पको पक्षमा रहेका ह्याकरहरुले ह्याक गरेर मतपरिणामलाई उल्टाउन भूमिका खेलेको दाबी गरेकी छन् । विसकन्सिनको...
►बीबीसी भारतमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम भन्दै ५०० र १००० दरका ब्यांक नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले रातारात गरेको निर्णयले देशको प्राय: नगदमा आधारित अर्थतन्त्रमा सञ्चालनमा रहेको ८६% नगद प्रभावित भएको छ। तर केही चलाख भारतीयहरुले नगद संकटको अवस्थालाई पनि अवसरका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्छन् बीबीसीका विकास पाण्डे। दिल्लीको...
विश्वका १० सफल लगानीकर्ताको लगानी मन्त्र
काठमाण्डौ । विश्वको आर्थिक वा राजनीतिक कारण राम्रो होस् या खराब, केही व्यक्तिहरुलाई यसले कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता व्यक्ति विश्वका सफल लगानीकर्ता हुन्, जो परिस्थिति अनुसार आफ्नो लगानी रणनीति समेत परिवर्तन गर्न माहिर छन् र दैनिक करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । यी व्यक्ति सेयर बजार, रियल स्टेट लगायत संभावित सबै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका...
हानोई । दर्ता नभएका वा मोबाइल फोनमा अबैधानिक रुपले चलनचल्तीमा ल्याइएका एक करोड बीसलाख सिमकार्डहरु सरकारले निष्क्रिय पार्ने भएको भियतनामको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । भियतनामको सूचना तथा सञ्चार ऐनले ब्यबस्था गरे अनुसार मोबाइलमा कुनै पनि सिमकार्ड प्रयोग गर्नु अघि सही नाम,सही ठेगाना,जन्म मिति इत्यादि उल्लेखगरी आफ्नो...
काठमाण्डौ । भारु १ हजार र ५ सय रुपैयाँको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुनसुुकै बेला मारिनसक्ने खबर त्यहाँका मिडियाहरुले छापेका छन् । यिनै खबरहरुपछि चर्चित योगगुरु बाबा रामदेवले समेत नोटबन्दीका कारण प्रधानमन्त्रीको ज्यान खतरामा परेको भन्दै उनलाई सहयोग गरी उनको ज्यान जोगाउन जनताको नाममा...
काठमाण्डौ । भारतले १ हजार र ५ सय भारुको पुरानो नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै अहिले विश्वभरि कालोधनको चर्चा भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुकाइएको कालोधन निकाल्ने जुक्तिको रुपमा यो जोखिमपूर्ण कदम उठाएको भनिए पनि भारतभित्रै प्रमुख विपक्षी लगायतका दलहरुले यसको कडा स्वरमा विरोध गरिरहेका छन् । तर, भारत सरकारले यो...
काठमाण्डौ । रिटायर भएपछि पनि बाराक ओबामाले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने योजना बनाएका मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् । ओबामा ह्वाइट हाउसबाट निस्किएपछि पनि वार्षिक अरबौं रुपैयाँको कमाई गर्नेछन् । यसैगरी, अमेरिकाका पूर्व राष्टपति बिल क्लिन्टन जर्ज बुस पनि एक लेक्चरबाटै करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेका छन् । आउनुहोस्, जानौं...
भारतमा पेट्रोलको भाउ घट्यो
काठमाण्डौ । भारतमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटेको छ । मंगलबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर भारु १.४६ र डिजेल भारु १.५३ ले घटेको हो । यसअघि भारतमा लगातार ५ पटकसम्म पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि भएको थियो । नोभेम्बर ६ मा पेट्रोल ८९ र डिजेल ८६ पैसाले बढेको थियो । त्यसअघि अक्टोबर १५ मा १.२४ पैसाले भाउ वृद्धि भएको थियो...
एप्पलको आइफोन बोक्नुभएको छ ? बमजस्तै पड्कनसक्छ
काठमाण्डौ । एप्पल कम्पनीको आइफोन सेभेन प्लस बोक्नुभएको छ ? यदि छ भने यो जुनसुकै बेला तातेर पड्किन र आगो लाग्न सक्छ । केही समयअघि सामसङको ग्यालेक्सी नोट सेभेनमा यस्तै समस्या भएर सो उत्पादन नै बन्द गर्दा कम्पनीलाई अरबौं घाटा लागेको थियो । सामसंगको उत्पादन बम जस्तै पड्किन थालेपछि नयाँ उत्पादन बन्द गरिएको थियो । यस्तै समस्या एप्पलको...
एनआरएनए कतारमा साढे ११ लाख हिनामिना(प्रमाणसहित)
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति(एनआरएनए) कतारमा ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ (३८ हजार ७ सय ९६ रियाल) आर्थिक हिनामिना भएको पुष्टि भएको छ । एनआरएन कतारको लेखा परीक्षण उपसमितिले अध्ययन गरी ३८ हजार ७ सय ९६ रियालको कारोबार अबैध भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो । गत अप्रिल २९ गते भएको दोस्रो परिषद् भेलामा प्रस्तुत आर्थिक ...
भारुमा लागेको प्रतिबन्धले ५ देशलाई सकस, विनिमय दरमा पहिरो
नयाँदिल्ली । मोदी सरकारले कालोधनमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले ५ सय र १ हजार भारुको नोट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको असर भारतमा मात्र परेको छैन, भारतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत उत्तिकै देखिएको छ । कतिपय देशको विनिमय दरले त यही निर्णयका कारण अनपेक्षित रुपमा ठूलै पहिरोको सामना गरिरहेको छ । बंगलादेश बंगलादेशी वेबसाइट &ls...
कालोधनलाई सेतो बनाउन लाखौं भारतीय गुगलको शरणमा !
नयाँदिल्ली । मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १ हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि धेरै भारतीयहरु गुगलको शरणमा पुगेका छन् । मानिसहरुले गुगलमा सर्च गर्न सुरु गरेका छन्–‘कालो धनलाई कसरी सेतो बनाउने ?’ सर्च इञ्जिन गुगलमा यो ‘की वर्डस’ ट्रेन्डमा रहेको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । भारतको कुल...
यसरी पारिदैछ कालो भारुलाई सेतो !
नयाँदिल्ली । मोदी सरकारले भारु ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै भारतमा कालोधन सञ्चित गर्नेहरु तनावमा छन् । तर, उनीहरुले त्यहाँको सरकारलाई झुक्याएर विभिन्न जुक्ति प्रयोग गरी कालोधनलाई सेतो बनाउने काम पनि गरिरहेका मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । धेरैले भारतमा विभिन्न विकल्प प्रयोग गरी...